Martech Zone: Kusoo Dhawaada Daabacaaddayda Cusub ee Martech! | Martech Zone
Jimco, Janaayo 6, 2017 Isniin, November 2, 2020 Douglas Karr
Waxay ahayd hal sano oo keliya tan iyo markii ugu dambeysay ee aan maqaarka ku shubo bartayada 'WordPress'. Intii aan jeclaa qaabka, waxaan haystay tanno ah fiilooyin iyo habeyn si aan uga dhigo inay u shaqeyso sidii aan doonayay, sidoo kale. Iyadoo la adeegsanayo WordPress, taasi waxay bilaabi kartaa inay higgaadiso masiibo marka loo eego waxqabadka waxaanan arkayay dildilaaca aasaaska.
Marka, waxaan ugaarsi ugaarsaday naqshad isku dari kara labadaba bandhigyo aad u waaweyn iyo sidoo kale inaan ka jawaabo shaashadaha moobilada - dhammaan anigoo ku dhiirrigelinaya akhristayaashayada inay ku ekaadaan si ay u helaan macluumaadka ay raadinayeen.
Waxaan sameeyay caado WordPress dulucda ilmaha ku saabsan mawduuc aasaasi ah oo si fiican loo taageeray oo laga soo iibsaday Dulucda, ka dibna ku darnay waxqabad weyn oo aan u baahnayn inaan ku riixno waxyaabaha ku jira codsigeenna moobiilka iyo sidoo kale isku-darka quudinteena qaar ka mid ah adeegyada gaarka ah ee aan dooneyno inaan kula wadaagno waxyaabaha.
Sidaad dareentayba, waxaan dib ugusoo koobay Blog Blog Technology Martech Zone, adoo adeegsanaya ereyga warshadaha u gaarka ah iibka iyo tikniyoolajiyadda suuq geynta… MarTech. Ereyga blog wuxuu maray dhinacii markii aan sii waday daabacaadda cilmi baaris iyo maqaallo diiradda saaraya ka caawinta xirfadleyda baaritaanka, ogaanshaha, iyo barashada tikniyoolajiyadda iyo suuqgeynta.
Sidoo kale waxaan haystaa domain fudud oo aan iibsaday suuqgeynta. Teknolojiyada in horay loo sii wado halkan (waxaan u wareejin karnaa wax wal oo aan u wareejineynaa boggaas mar. farsamooyinka tiknoolajiyada ayaa xoogaa caan ah).
Maxay Kale Sameysaa Martech Zone Leedahay?
Resources - Hadda waxaan haystaa wax dhammaystiran Kheyraadka Martech qaybta, oo ay ku jiraan dhacdooyinka, wargeysyada, iyo ilo kale.
podcast - Waxaan sii wadaa wareysiga hogaamiyaasha softiweerka, xirfadleyda, qoraayaasha, iyo dadka ku hadla warshadaha iibka iyo suuq geynta Martech Zone Wareysiyo.
Waa maxay yoolka ugu dambeeya ee Martech?
Waxaa laga yaabaa inaan ka maqnaado toban sano, laakiin marwalba waxaan fiiriyaa iskaashi aan la sameeyo shirkadaha xubinnimada, bixiyeyaasha, bulshada, ilaha waxbarashada, iyo shahaadooyinka certific haddii aad hayso wax ku kordhinaya qiimaha daabacaaddayda, ii soo sheeg!
Tags: blogjenn lisakblog tiknoolajiyadda suuqgeyntahalgankablog martechbulshada martechxarunta barashada martechwaqtigathemetheme word
13 Dariiqo oo Mawduuca Lacag looga Sameeyo Khadka Tooska ah